Mkpa oku ekwentị na njem ndị ahịa | Martech Zone
Otu n'ime njirimara anyị na-ebido na anyị ndekọ ụlọ ọrụ is pịa ịkpọ. Na nso nso a, anyị goro onye enyemaka na-akwadoghị maka ụlọ ọrụ nke anyị. Ihe anyị matara nke ọma bụ na ụfọdụ atụmanya na azụmaahịa agaghị eme azụmahịa ọ gwụla ma ha nwere ike ịkpọ ekwentị ma kpọọ ahịa ahụ.
Ewezuga nnweta, okwu ọzọ bụ naanị mma. Ọtụtụ mmadụ na-eji igwe eji arụ ọrụ iji nyocha ma chọta azụmaahịa ha chọrọ ijikọ. Ikike iji jikọọ aka nri n'ebe ahụ ka ihe niile dị. Ọ bụrụ n’inweghị na ndị asọmpi gị nwere ya, ikekwe ha ga-akpọ oku ma ị gaghị enweta ya. Nke ahụ abụghị tiori - data Invoca na-egosi na oku ekwentị mere ka ọnụego ntụgharị 30% gaa 50% ebe ịpị aka na-ebute 2%.
Invoca nyochara ihe karịrị oku 32 nde karịrị ụlọ ọrụ 40 nke sitere na usoro ya n'afọ gara aga, wee gosipụta echiche nke na-emetụta ndị ahịa niile taa: mmụba ekwentị na-ebugharị karịa naanị mkparịta ụka dijitalụ na obere ihuenyo - mobile na-agbagharị ọtụtụ oku na azụmaahịa.
Invoca nyochara ihe karịrị 32 nde oku n'ofe ọrụ iji chọpụta otú oku ekwentị si emetụta ahịa dijitalụ. Lelee Invoca's infographic iji mụtakwuo banyere mkpa oku dị na njem ndị ahịa, ọwa dijitalụ ama ama na-akwọ ụgbọala, yana usoro ndị na-akpọ oku na-atọ ụtọ. Can nwekwara ike ịchọta ọbụna stats dị ịtụnanya, nghọta, na ndụmọdụ bara uru dị ka ndị a na 2015 Kpọọ ọgụgụ isi Index.
Emeputara ọnụọgụ ọnụọgụ na infographic a:
Ndị ahịa na-ahụ n'anya ịkpọ mgbe ha chọrọ ịzụta. 61% nke ndị na-enyocha ekwentị na-ekwu na pịa-oku na-akachasị baa uru na oge ịzụta.
Ndị ahịa hụrụ n'anya ịkpọ mgbe ha chọrọ enyemaka. 75% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na oku ekwentị bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta nzaghachi.
Ndị ahịa hụrụ n'anya ịkpọ mgbe ha na-eji nyocha mkpanaka. 51% na-ekwu na ha kwesịrị ịkpọ oku mgbe niile ma ọ bụ ugboro ugboro site na mgbasa ozi ọchụchọ mkpanaka.
Tags: njem ndị ahịainbound okuinfographicinvocaoku mkpanaka okuoku ekwentịmobile mgbanweoku na-apụ apụekwentị
UsabilityHub: Nye ma Nweta Nzube ma ọ bụ Nzaghachi Usability